Madaxweyne Farmaajo oo Madaxweynaha Masar Khadka Taleefanka kula Xiriiray – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo Madaxweynaha Masar Khadka Taleefanka kula Xiriiray
Oktoobar 10, 2017 8:24 b 0
Warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay inuu Madaxweyne C/fataax Al-sisi uu Wicitaan Telefoon ka helay dhigiisa dalka Somalia, Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo Aragtida Masar ka taagan tahay Midnimadda Somalia.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu ku dheeraaday Xiriirka Taariikhig ee labada Waddan, wuxuuna bogaadiyey doorka Dowladda ku taageerayso Somalia iyo Taageeradda lagu soo celinayo Deganaanshaha Somalia.
Madaxweyne Farmaajo waxa kale oo uu ka mahad celiyey Taageeradda Farsamo ee ay Masar siinayso Somalia, gaar ahaan Difaaca Danaha Somalia ee Heer Gobal iyo Heer Caalami.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu dhigiisa dalka Masar warbixin ka siiyeey Horumaradii ugu dambeeyey ee laga gaaray Xaalladda Somalia, Tallaabooyinka asy DFS ee soo-celinta Nabadda iyo Ammaanka iyo caqabadaha hor taagan, gaar ahaan La-dagaalanka Alshabaab.
Dhinaca kale, Madaxweynaha dalka Masar, C/fataax Al-sisi waxa uu qiray inuu Xiriir Xooggan ka dhexeeyo Masar iyo Somalia, isla markaana Dowladiisa taageero ka geysan doonto Midnimadda Somalia.
Aqoonyahano Ka Hadlay Dowladda Somaaliya Lacagta Cusub ee ay soo Daabacayso (dhegayso)